Makurukota Anotoreswa Mhiko naVaMugabe
HARARE — Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vagadza makurukota ehurumende makumi matatu anosanganisira vakadzi vana, pamwe nevatevedzeri vavo makumi maviri nevashanu pachiitiko chaitirwa pa State House muHarare.
Makurukota ese akadomwa neChipiri, kusanganisira makurukota ematunhu gumi, ayo ane madzimai maviri chete, atora mhiko pamberi paVa Mugabe. Mumwe wevatora mhiko ava, ndiAmai Joice Mujuru, vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Amai Mujuru havana kunge vadomwa neChipiri pakadomwa makurukota ehurumende zvakasiya veruzhinji vachibvunza kuti Va Mugabe vanga vane pfungwa dzipi panyaya yevatevedzeri vavo.
Sachigaro we Zanu PF, VaSimon Khaya Moyo, avo vakadomwa kuve gurukota guru muhofisi yemutungamiri wenyika, ndivo vari kunzi vangangotora chigaro chemumwe wevatevedzeri vaVa Mugabe pamusangano wepagore we Zanu PF wakatarisirwa kuitwa muna Zvita.
Vachitaura mushure mekutoresa makurukota ehurumende mhiko, VaMugabe vati vakasarudza makurukota aya pamwe nevatevedzeri vavo vachitarisa ruzivo rwune vanhu ava.
VaMugabe vatiwo hurumende yavo ichatora matanho nekukasika kuti vawone kuti hupfumi hwenyika hwaendeswa kune veruzhinji pasi pechirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema.
Vati kana Va Francis Nhema, avo vakadomwa segurukota rinowona nezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema, vakatadza basa iri, vanogona kuvachinja nekukasika.
Vati hurumende yavo haisi kuzodzokera shure nechirongwa ichi.
Vagadzwa segurukota rinowona nezvemigoghi, Va Walter Chidhakwa, vati vachatora matanho akasimba kuitira kuti veruzhinji vawane cheuviri mumigodhi iri pasi pemakambani ekunze ari munyika pasi pechirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema.
Gurukota idzva rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vakurudzira nyika dzakatemera VaMugabe nevamwe vavo vari mu Zanu PF zvirango kuti vabvise zvirango izvi nekukasika kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kusimudzira hupfumi hwayo.
Panyaya yedhora remu Zimbabwe, Va Chinamasa vati mari yemu Zimbabwe haisi kuzodzoka munguva pfupi iri kutevera.
Vagadzwa segurukota rinowona nezvekuburitswa kwemashoko, Va Jonathan Moyo, avo vakavharisa mapepanhau apo eDaily News, Tribune nemamwe apo vaive gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vati vachashanda nemasangano ese ezvekuburitswa kwenhau anosanganisira nhepfenyuro dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika dzakaita se Studio 7, 1st TV, Radio VOP pamwe ne Short Wave Radio Africa.
Asi Va Moyo vakurudzira masanganao enhau aya kuti azive kuti pane chisungo chesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica re SADC chekuti nhepfenyuro idzi dzinofanirwa kuvharwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvehutano, Va Paul Chimedza, vatiwo bazi ravo richashanda zvakasimba kuwona kuti veruzhinji vawana mishonga muzvipatara zvose munyika.
Kugadzwa kwemakurukota ehurumende kwaitwa uku kwave kureva kuti makurukota aya atotanga basa uye veruzhinji vakatarisira kuti zvose zvaivimbiswa ne Zanu PF payaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru, zvichazadziswa.
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro.